အတုယူအားကျစရာကောင်းသော အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ၏ ဘ၀များ
အမှန်တကယ် အလေးအနက်ထားပြီးအောင်မြင်ချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတခုမှာ
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းပုံများကိုလေ့လာသင်ယူပြီး လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော် ရန်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်လိုသောစိတ်ရှိသူတော်တော်များလည်း ဘ၀တွင်ကျရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောင်မြင်သူများ၏သာယာလှပသော ဘ၀ကိုသာမြင်တွေ့ကြတတ်ပြီး လက်ရှိဘ၀ကို ရောက်ဖို့ ဘယ်လိုရုန်းကန်ဖြတ်သန်းခဲ့ရလည်းဆိုတာ မမြင်နိုင်၊မသိနိုင်ခဲ့ကြလို့ပါ။
အောင်မြင်သော သူများ၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းပုံကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့် သင်လည်းပဲဘယ်လိုအတုယူကျော်ဖြတ်နိုင်မလဲ သင့်အတွက်ကောဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရရှိပြီး ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုလျှောက်လမ်းရမလဲဆိုတာ သင်ခန်းစာယူနိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော်ဝေမျှလိုသော အကြောင်းအရာလေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ၏ အတိုချုန်းထားတဲ့ဘ၀သင်ခန်းစာလေးတွေပါ။ အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အများလေးစားဂုဏ်ယူတဲ့ဘ၀ကိုရောက်ရှိခဲ့ပုံလေးပေါ့။
Soichiro Honda – ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားသူပေါ့။ ဟွန်ဒါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မသိသူမရှိလောက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ကားအမျိုးအစားပါ။ တချိန်ကဟွန်ဒါ မတည်ထောင်ခင် တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ်လျှောက်စဉ် မိမိနှင့်သင့်တော်သောနေရာမရှိဟု အငြင်းခံလိုက်ရသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျတဲ့အပြင် မခံချင်စိတ်ဖြင့်ကြိုးစားသဖြင့်ယခုအချိန်မှာ တိုယိုတာနှင့်အပြိုင်ကုမ္ပဏီတခုအဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ပါပြီ။ သင်လည်းပဲဘယ်လိုပဲအငြင်းခံရပါစေ သင်ရောက်လိုသော ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားပါ။
Stephen King- နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတဦးလို့ လူသိများတဲ့စတီဗင်ကင်းဟာဆိုရင်လည်းပဲ ပထမဦးဆုံးဝတ္တုကိုဖြန့်ချီရန်ကြိုးစားရာတွင်ဘယ်လိုမှ အစဉ်မပြေခဲ့ပဲ အမှိုက်ပုန်းထဲအထိမိမိစာအုပ်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး ဇနီးမယား၏ အားပေး၊တိုက်တွန်းမှုဖြင့် အမှိုက်ပုန်းထဲကပြန်လည်ကောက်ယူ
ကာနောက်တကြိမ်ဖြန့်ချီရန် ကြိုးစားရာမှ အစပြုကာအောင်မြင်ကျော်ကြားသူ တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သင်ခန်းစာအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ပါ ဘယ်သူမှလက်မခံသေးခင်ကာလမှာ စိတ်ရှည်၊ဇွဲရှိစွာကိုယ်သွားလိုသော ခရီးကိုရောက်အောင်သွားပါ။
Thomas Edison- သောမတ်စ်အဲဒီစင် လို့ဆိုလိုက်ရင်တော့လူအများသိပြီးတဲ့အတိုင်း မီးသီးတလုံးထွန်းလင်းဖို့အတွက် မီးသီးပေါင်း ၉၉၉လုံးကိုအရင်စမ်းသပ်ခဲ့ရာ မအောင်မြင်သေးပဲ အလုံးတထောင်ရောက်မှပင်အောင်မြင်စွာတည်ထွင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် အံအားသင့်စရာကောင်းပေမယ့် သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ မအောင်မြင်ခဲ့သောမီးသီးတလုံးကိုစမ်းသပ်တိုင်းဒါဟာနည်းလမ်းအမှန်မဟုတ် မီးသီး မီးထွန်းလို့ရတဲ့အထိထပ်ကာတလဲလဲ ကြိုးစားခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။ သင်လည်းပဲ ဘ၀တွင်ဘယ်လိုကျရှုံးမှုများစွာကြုံတွေ့နေပါစေ သောမတ်စ်အဲဒီစင်ရဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာကိုယူက သင်လိုချင်သောဘ၀မျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
Oprah Winfrey- ကမ္ဘာ့အချမ်းအသာဆုံး အမျိုးသမီးတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ ရုပ်သံတင်ဆက်သူ အိုပရာဟာ ဆိုရင်လည်းပဲသူမရဲ့ဘ၀ ယခုလိုမဖြစ်ခင်စဉ်က အလုပ်မှတကြိမ်အထုတ်ခံရဖူးပြီး ရုပ်သံလောကကိုဝင်စ က သူမနဲ့ မကိုက်ညီနိုင်ဟုအပြောခံခဲ့ရဖူးသူဖြစ်သည်။ သူမလည်းမည်သို့သောအခါကမျှအရှုံးသမားလို့ မခံယူပဲရုန်းကန်ကြိုးစားရာမှ ယခုလိုအများအထင်ကြီးလေးစားရတဲ့လူတဦးအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
Bill Gates – ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကို တည်ထောင်သူဘေးလ်ဂိတ်ဟာဆိုရင်လည်း တချိန်ကအခြားကုမ္ပဏီတခုမှာပရောဂျက်တခုအ
တွက်၎င်း၏အိုင်ဒီယာကိုအဆိုတင်သွင်းရာ အငြင်းခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သူလည်းပဲလူတကာအထင်ကြီးလေးစားတဲ့ ဘေးလ်ဂိတ်ဖြစ်လာပြီ မဟုတ်ပါလော။
ထိုအောင်မြင်ကျော်ကြားသူများရဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာများကိုအမိအရ ရယူပြီး သင့်ဘ၀အတွက် အကျိုးရှိအောင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် သင်လည်းပဲ သင်လိုချင်သော အောင်မြင်သောဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
၁) အငြင်းခံရခြင်းများစွာရှိခဲ့သော် ကိုယ့်ဘ၀အတွက်အရှုံးသမားအဖြင့်မခံယူရန်
၂) ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးခြင်းကို ပြသနာတခုဟု မထင်မှတ်ရန်
၃) ကိုယ့်ကိုလက်မခံသူများဟာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိသောသူများအဖြစ်သာ မှတ်ယူရန်
၄) ဘယ်သူလက်ခံခံ မခံခံ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအမြဲတမ်းရှိရန်
ဘ၀တွင်ဘယ်လိုပင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါစေ မလျှော့သောဇွဲဖြင့်ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Ref: M.Farouk Radwan, MSc
World Myanmar (world-myanmar.com)
Mr. Guy ရေးသားသောဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သတ်၍ အကြံပေး ဆွေးနွေးလိုသူများ အောက်ပါလင့်ခ်တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
Telenor မှ မည်သည့် ဖုန်းကိုမဆို ခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်လျှင် (၂၅) ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Telenor Myanmar မှ သိရသည်။ လက်ရှိ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ် (၅ဝ) ကျပ်နှုန်းနှင့် Ooredoo မှ တစ်မိနစ် (၃၅) နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံလျက် ရှိသည်။
“ပြည်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေ နိုင်အောင် ဘယ်ဖုန်းကို ခေါ်ခေါ် (၂၅) ကျပ်ပဲ ကောက်ခံမယ်။ Sim ကတ်နဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်ဒ်တွေကို နောက်လလောက်မှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်သွားမယ်” ဟု Telenor Myanmar မှ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုစိုးသူက ပြောသည်။
Telenor မှ ဆင်းမ်ကတ်ဒ် များအား စက်တင်ဘာလတွင် 2G ၊ 3G ဆင်းမ်ကတ်ဒ် တစ်ကတ်အား (၁၅ဝဝ) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်း Sim ကတ်ဒ်များမှ မိုဘိုင်းနှင့် ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သည့် Video Call ၊ Voice mail ၊ အင်တာနက် စသည် တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“MPT အနေနဲ့ ကလည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ဈေးနှုန်းတွေ လျှော့ချဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ။ ပြည်သူတွေ အားလုံး အဆင်ပြေစေမယ့် ဈေးနှုန်း ဖြစ်မှာပါ။ မကြာခင်တော့ အကောင်အထည် ဖော်သွားမှာပါ” ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးငွေသောင်းက ဆိုသည်။
Telenor မှ ရောင်းချမည့် Sim ကတ်ဒ်များမှာ 2G ကွန်ရက်ဖြစ်၍ မည်သည့် ဟန်းဆက်မဆို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆင်းမ်ကတ်ဒ်များ စတင် ရောင်းချချိန်တွင် ဆင်းမ်ကတ်ဒ် သန်း (၃ဝ) ရောင်းချပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Telenor Myanmar မှ သိရသည်။
"Facebook သုံးစွဲသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ကျော်ထံ Color Change malware ပျံ့နှံ့နေ ဟု ဆို"
Facebook profile ကို အရောင်များဖြင့် ပြောင်းလဲပေးမည် ဆိုသော Color Change scam သည် သုံးစွဲသူ များကို ဆိုက်တစ်ခုမှ malware အား download ပြုလုပ်စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ malware သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Facebook သုံးစွဲသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ကျော်တွင် ကူးစက် ပျံ့နှံ့နေကြောင်း တရုတ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ Cheetah Mobile က ဆိုခဲ့သည်။
၎င်း malware သည် Facebook သုံးစွဲသူ များက ၎င်းတို့၏ profile အရောင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည် ဟူသော app တစ်ခုကို ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် app ကို download ပြီး သုံးစွဲသူအား အန္တရာယ်ရှိသည့် phishing ဆိုက်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Cheetah Mobile ၏ လုံခြုံရေး သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ phishing ဆိုက်သည် သုံးစွဲသူ များအား နည်းလမ်း နှစ်မျိုးဖြင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမ နည်းလမ်းသည် Color Changer အသုံးပြုပုံ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုခိုင်းကာ သုံးစွဲသူ၏ Facebook Access Token များကို ခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ Token များကို ယာယီ အသုံးပြုခွင့် ပေးပြီးနောက် ဟက်ကာများက သုံးစွဲသူ၏ Facebook သူငယ်ချင်း များထံ ချိတ်ဆက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သုံးစွဲသူက ဗီဒီယိုကို မကြည့်ရှုပါက phishing ဆိုက်သည် အန္တရာယ်ရှိသည့် application ကို download ပြုလုပ်စေရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူက ကွန်ပျူတာပေါ်မှ အသုံးပြုက phishing ဆိုက်သည် video player တစ်ခုကို download ပြုလုပ်စေမည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူက Android ထုတ်ကုန် တစ်ခုပေါ်မှ အသုံးပြုပါက phishing ဆိုက် အနေဖြင့် ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် malware ကူးစက် ခံနေရကြောင့် သတိပေးချက် တစ်ခု ဖော်ပြကာ app တစ်ခုကို download ပြုလုပ်စေမည် ဖြစ်သည်။
၎င်းပြဿနာသည် Facebook တွင်ရှိသည့် အားနည်းချက် တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အားနည်းချက်သည် Facebook အခြေခံ app များ အတွင်းသို့ ဟက်ကာများက virus များနှင့် အန္တရာယ် ရှိသည့် code များ ထည့်သွင်းစေနိုင်ကြောင်း Cheetah Mobile မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အားနည်းချက်ကို Facebook က ပြင်ဆင်ရန် စီစဉ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ မသိရှိသေးကြောင်း Mashable က ဖော်ပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရန် ရွှေစင်ကြွေးကျန် လုံးဝမရှိကြောင်း အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က တရားဝင်ငြင်းဆို
အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အား ပေးဆောင်ရန် အကြွေး မရှိကြောင်း အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က Tomorrowသို့ တရားဝင် ပြောကြားလိုက်သည်။
“ဒီအပေါ်မှာ ပြောချင်တာက အကြွေးပေးစရာ မကျန်ပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သွားစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ရတယ် ကြိုက်တာနဲ့စစ်”ဟု အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ၊ ရွှေမိုးယံ ကုမ္ပဏီနှင့် အာရှကမ္ဘာမြေ ကုမ္ပဏီတို့မှ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့် ရွှေကြွေးကျန်မှာ ပိဿာချိန် ၁၀၀၀နီးပါးအထိ ရှိနေကြောင်း ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ အပေါ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက စိစစ်ထားသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်ဟု ဆိုသည့် သတင်းအပေါ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီအစီရင်ခံစာ အဖွဲ့တွေကို သေချာပြန်စိစစ်ပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။ မီဒီယာတွေကလည်း အမြဲတမ်း မှန်အောင်ရေးဖို့လိုတယ်။ သတင်းတစ်ခုကို ရတယ် ဆိုတာနဲ့ ရေးဖို့မသင့်ဘူး”ဟု အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က တန်ပြန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ရွှေမိုးယံနှင့် အာရှ ကမ္ဘာမြေ ကုမ္ပဏီ၃ခုတို့သည် နိုင်ငံတော်သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်အထိ ပေးသွင်းရမည့် ရွှေစင်ကြွေးကျန်မှာ ပိဿာချိန် ၁၀၀၀ကျော် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်အထိ ရွှေစင် ၄၆ပိဿာကျော်သာ ပေးသွင်းသည့် အတွက် ရွှေစင်ပိဿာချိန် ၉၆၀နီးပါး ကြွေးကျန် ရှိနေပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာမှု မရှိသည့် အပြင် ရွှေကြွေးကျန်များ ရှိသော်လည်း အထက်ပါ ကုမ္ပဏီများနှင့် ငါးနှစ်အထိ ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် အနေဖြင့် များစွာနစ်နာလျက်ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာ တစ်ခုမှ ထပ်မံရေးသား ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတော့ တပည့်တော် ရင်နာတယ် ဘုရား” လူမှုရေး စာမျက်နှာ တစ်ခုမှ စတေးတပ်တစ်ခု
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ဘ၀မှ လူဝတ်လဲကာ အိမ်ထောင်ပြုသွားသော ဦးစိုးမြင့်၏ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆက်တွဲ ကောလဟာလများစွာ ပေါ်ထွက်လျက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကောလဟာလများမှာ လူမှုရေး စာမျက်နှာ အချို့တွင် ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိနေကာ ယင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဦးစိုးမြင့်နှင့် ယင်း၏ မိသားစုဝင်များအား Tomorrowဂျာနယ်မှ ဆက်သွယ်သော်လည်း အဆက်သွယ် မရခဲ့ပေ။
“လူမှုရေး စာမျက်နှာတွေမှာ ပထမဆုံး တတ်လာတဲ့ စာသားက “ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ တပည့်တော် ရင်နာတယ် ဘုရား”ဆိုတဲ့ စာသားပါ၊ အဲ့ဒီစကား မြင်ရတာ အတော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်၊ အားလုံးလည်း ၀ိုင်းပြီး ပြောထားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ စတေးတပ် တင်သူဟာ ပရိုဖိုင်းပုံ အမှန်နဲ့ အမေရိကန်ကားမှာ နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အဆိုပါ လူမှုရေး စာမျက်နှာအား တွေ့ရှိခဲ့သူ အွန်လိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုကျော်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေး သော်လည်းယင်း ကိစ္စများ မှာ လူမှုရေး စာမျက်နှာများတွင် လူသိရှင်ကြား ဖြစ်နေကြောင်း ယင်းကောလဟာလများတွင် ယနေ့ အချိန်ထိ အိမ်ထောင်ဘက် အမျိုးသမီးအား လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်မပြခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများ အပေါ်လည်း သံသယ အနေဖြင့် ရှိနေကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ ဆရာတော် ဘ၀တွင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခဲ့သည့် တပည့် တစ်ဦးမှလည်း “ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်၊ ကိုယ်တွေက ယုံကြည်ပြီး ကိုးကွယ်လာတာဆိုတော့ မယုံကြည်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပထမတုန်းက ပြောတာ လည်ချောင်း ပြဿနာ၊ ခါးပြဿနာတွေကြောင့် လူဝတ်လဲတယ်လို့ ကြားတယ်၊ သူများတွေက ပြောတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ၊ ကိုယ်တွေ မယုံဘူး၊ အခုဆို ကြားရတာ အတော်လေး စိတ်ညစ်ရတယ်၊ ယူတဲ့ အမျိုးသမီးမှာ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင်ကို နှမြောမိပါတယ်၊ ဒီသတင်း မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်”ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစီအမံကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ လူတန်းစားမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အချိန်မရွေးနေရာတိုင်းတွင် တယ်လီဖုန်းများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ လူမှုရေး ကိစ္စ၊ စီးပွားရေးကိစ္စများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါပြီ။ ယခုလက်ရှိ အနေအထားအရ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းများသည်မည်သည့် နေရာကပြောနေသည်။ ပြောသူ၏ဥပဓိရုပ်ပုံသည် မည်သို့ရှိသည်ကို တိတိကျကျ ပုံဖော်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါ။ အသံဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရသောအခါတွင် ပြောဆိုသူတို့၏ စကားအရာ ပါးနပ်မှု၊ ယဉ်ကျေးချိုသာမှုသည် အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။
ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တို့ကို တင်ပြလိုပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ကျွန်တော် ကျောင်းအုပ်ကြီးဘဝဖြင့် နယ်မြို့ကြီး၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် မကွေးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှ ဖုန်းဝင်လာရာ ဖုန်းလက်ခံသူ ဝန်ထမ်းငယ်၏ အပြောအဆို မယဉ်ကျေးမှုကြောင့် ဆရာကြီးခမျာ တော်တော်မျက်နှာပူခဲ့ရပါသည်။
နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ ကျောင်းရုံးခန်းနှင့် ဆရာကြီးအိမ်ခန်းကို လိုင်းခွဲဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါ သည်။ တစ်ခုသော ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် Phone Duty ဝန်ထမ်းအား ပြန်နားစေ၍ ဖုန်းဝင်လာပါက ဆရာကြီးလက်ခံပါသည်။ ထိုစဉ်ဝင်လာသော ဖုန်းမှာ . . . . . . “ဟုတ်ကဲ့အမိန့်ရှိပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အ.ထ.က (၂) ကပါ။ အခုဖုန်းကိုင်တာဘယ်သူလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘာအတွက်ပါလဲခင်ဗျာ၊ အေးငါကဘယ် သူကွ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကဆက်နေတာ ကျောင်းစောင့်အိမ်က တစ်ပေတက်နဲ့ စကားပြောချင်လို့ အခုခေါ် ပေးပါ။” အသံကအပေါ်စီးက မာရေကျောရောနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်တင်းသွားတယ်။ “ဟုတ် ကဲ့အခုဖုန်းကိုင်တာ ကျောင်းအုပ်ကြီးပါ။ ရုံးချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက် အနားမှာခိုင်းစရာလူလည်းမရှိပါဘူး။ နောက်ဒီအချိန်ဆက်လည်း ခေါ်မပေးပါဘူး။ ရုံးချိန်ဆက်ရင်တော့ ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ပေးကောင်းခေါ် ပေးပါလိမ့်မယ်” ဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်တော့တယ်။ ကျောင်းစောင့်ကိုလည်း ခေါ်ပြီးသတိပေးလိုက်ရပါ တယ်။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ရန်ကုန်မှအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါသည်။ ည ၉ နာရီခန့်မှာ သမီးဖုန်း သို့ဖုန်းအမှားတစ်ခုဝင်ပါသည်။ တစ်ဖက်ကပြောသော စကားကိုလုံးဝနားမထောင်၊ မူးနေသောအသံ ဖြင့် သူပြောချင်တာတွေ ဇွတ်ပြောနေသည်။ သမီးက ဖုန်းမှားနေပါတယ် ပြောရလည်းမရပါ။ နှစ်မိနစ်၊ သုံးမိနစ်ခြားတစ်ခါ သုံးကြိမ်လောက် ထပ်ဆက်နေပါသည်။ ကြားသော ဖအေလုပ်သူက မကြား ယောင်ပြု၍ မရတော့။ “ကဲ လူလေးမင်းကို ဖုန်းမှားနေတယ်လို့ပြောနေတာ၊ ဘာကြောင့်ခဏခဏ ထပ်ဆက်နေတာလဲ၊ ကဲမင်းကိုသတိပေးလိုက်မယ် ဒီဖုန်းပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ငါနာရီဝက်အတွင်း ရှာနိုင်တယ်။ မင်းဘယ်နေရာက ဆက်နေတယ်ဆိုတာ ၄၅ မိနစ်အတွင်းသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီတစ်ခါ သည်းမခံတော့ဘူး” ဟု ပြောလိုက်မှ ဖုန်းသံတိတ်သွားပါသည်။
“နှုတ်ချို သျှိုတစ်ပါး” ဖြစ်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးချိုသာစွာ ပြောဆိုခြင်းဖြင့် မိမိတွင်ဘာမျှ မနစ်နာနိုင်ပါ။ လူချစ်လူခင်ပေါများ၍ မိမိ၏အလုပ်အကိုင်များသာ ချောချောမွေ့မွေ့ ပြီးစီးနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
‘နှုတ်ကြောင့် သေ၊ လက်ကြောင့် ကြေ’ ပါသည်။ ‘အမိယုတ်က နှုတ်သရမ်း၏’ မိမိ၏မယဉ်ကျေးမှု ကြောင့် မွေးမိခင်ပါအစစ်ပါရတော့သည်။
အချို့ဖုန်းပြောသူတို့သည် နားထောင်ရသည်မှာ နားဝင်ချိုလှပေစွ။ တောင်းခံသည့် အကူအညီဖြစ်ပါက ချက်ခြင်းဆောင်ရွက် ပေးချင်စိတ်များပေါ်လာအောင် ‘နှုတ်မှုစွမ်းရည်’ ဖြင့် ပါးပါးနပ်နပ်ပြောဆိုနိုင်ကြ ပါသည်။
ယခုအခါ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ရာထူးကြီးငယ်မရွေး တောရောမြို့ပါ Hand Phone များကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ နိုင်ငံကြီးသားပီပီ တရားတော်၏ အဆုံးအမတို့နှင့်အညီ ပီယဝါစာ ပြောဆိုကြမည်ဆိုပါလျှင် . . . .
သြဂုတ် (၂) ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မြန်မာနှစ်ဦး ပါဝင်သည့် ပီနန်ပြည်နယ်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ၀တ်လစ်စလစ် ဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားရဲများ စုံစမ်းနေ
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာနှစ်ဦးပါဝင်သည်ဆိုသော ၀တ်လစ်စလစ်ပွဲတစ်ပွဲအား ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲများက စုံစမ်း လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပီနန်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ တာလုဘာဟန် ကမ်းခြေပေါ်တွင် ကိုယ်ပေါ်တွင် ဆေးများရေးခြယ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လုံးတီး ကခုန်နေသူ ၁၈ ဦးတို့အား ရိုက်ကူးထားသည် ဗီဒီယိုသည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗီဒီယိုတွင် မလေးရှားမှ ၇ ဦး၊ မြန်မာမှ ၂ ဦး၊ ဖိလစ်ပိုင်မှ ၁ဦး နှင့် အိန္ဒိယမှ ၁ ဦး တို့ပါဝင်ကြောင်း ပီနန်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားလျက် The Star သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းပွဲအတွက် ကမ်းခြေနှင့်အနီးဝန်းကျင်ကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရသည့် ပီနန်အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မလေးရှားအွန်လိုင်းသ တင်းဝက်ဘ်ဆိုက် The Rakyat Post တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေးသားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပီနန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က “ပီနန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကာစီနိုရုံတွေကိုတောင် ဖွင့်ခွင့်မပေးတာ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
အူရီးဒူးကုမ္ပဏီမှ မိုဘိုင်း ဆင်းမ်ကတ် များ ရောင်းချပြီးနောက် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် များတွင် ဟန်းဆက်များ ဝယ်ယူမှု မြင့်တက် လာပြီး ဟန်းဆက် အမျိုးအစား အချို့ ကျပ်နှစ်သောင်း ဝန်းကျင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက် သွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဇူလိုင်လကုန်မှ စ၍ ရောင်းချပေးနေသည့် အူရီးဒူး ဆင်းမ်ကတ်များ ထည့်သွင်း အသုံးပြုရန် မိုဘိုင်းဟန်းဆက် ဝယ်ယူမှုမြင့်တက် လာပြီး ကျပ်ငါးသောင်းမှ တစ်သိန်းခွဲကြားရှိ 3G ဟန်းဆက် များကို ဝယ်ယူမှု များပြား လာကြောင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် များမှ စုံစမ်း သိရသည်။
‘‘ဟန်းဆက်က အရင်ကထက် ပိုပြီး အရောင်း ပွင့်တယ်။ အူရီးဒူး အတွက် ဆိုပြီး သပ်သပ်ဝယ်ကြတာ များတယ်။ အဓိကကတော့ ငါးသောင်းနဲ့ တစ်သိန်းကြားကို အဝယ် များလာတယ်’’ ဟု Mr.Fone မှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ကိုထက်လင်းကျော် က ပြောသည်။
မိုဘိုင်းဟန်းဆက် အချို့မှာ နာမည်ကြီး တံဆိပ် အမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်း အူရီးဒူး၏ မိုဘိုင်း အင်တာနက်လိုင်းကို အပြည့်အဝ မသုံးစွဲနိုင်ဘဲ လိုင်းပျောက်ခြင်း၊ ဖုန်းပိတ်သွားခြင်း များရှိခြင်းကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် များသို့ လာရောက် လဲလှယ်ခိုင်းခြင်းများ လည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
အူရီးဒူးဆင်းမ်ကတ် သုံးစွဲနိုင်ပြီး Video Call ခေါ်ဆိုမှု ရရှိနိုင်မည့် Huawei အမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက် အချို့ကို ဝယ်ယူမှု များပြား လာကာ ရောင်းအားကောင်းသည့် မိုဘိုင်းဟန်းဆက် အချို့မှာ ကျပ်နှစ်သောင်း ဝန်းကျင် ခန့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက် သွားကြောင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် များမှ သိရသည်။
‘‘Huawei Honor 3C ဆို တော်တော် ရောင်းရတယ်။ ပစ္စည်း လည်း ပြတ်တယ်။ ဒီမှာ တချို့ ဟန်းဆက်တွေ တအား ရောင်းရတော့ တရုတ်ဘက်က ကို ဈေးမြင့် လိုက်တယ်။ မဖြစ်သင့် တဲ့ဈေးတွေ၊ တခြား အမျိုးအစားတွေရောပဲ တစ်လ မပြည့်သေး ဘူး။ တစ်သောင်း ကနေ နှစ်သောင်းကျော် အထိ ဈေးကတက် သွားတယ်’’ ဟု အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုတင်ဝင်းလှိုင် က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အူရီးဒူး ကုမ္ပဏီမှ မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ် များကို သြဂုတ် ၂ ရက်မှစ၍ ကနဦး စမ်းသပ်ကာလ အဖြစ် တရားဝင် ရောင်းချပေးနေပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် များ၌ ဆင်းမ်ကတ် သီးသန့် ဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း အချို့ ဆိုင်များတွင် ဟန်းဆက် ဝယ်ယူမှသာ လက်ဆောင် အဖြစ် အဆိုပါ ဆင်းမ်ကတ် များပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Credit : 7Day
သင့်ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀တ်လိုက်တိုင်း အမြဲတမ်း အထာကျနေအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ (အပိုင်း-၁)
ဂျင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားမယ့် ဖက်ရှင်ပဲပါ့။ ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်ဆိုရင်လည်း တစ်ထည်ဆို တစ်ထည်ဆိုသလောက် နှစ်ပေါက်အောင်ကို ၀တ်လို့ရတာနော်။ ဒါပေမယ့် ဘောင်းဘီရဲ့ ချုပ်ရိုးချုပ်သား၊ ဒီဇိုင်းစတာတွေကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်ဖို့၊ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဖို့ လိုတာပေါ့။ ၀ယ်တုန်းက အဆင်ပြေပြီး သေချာဝတ်ကြည့်လိုက်တာ့မှ အဆင်မပြေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အထိန်းအသိမ်း ညံ့လို့ ဂျင်းဘောင်းဘီဟာ လုံးဝမ၀တ်ဖြစ်တော့တာမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ အမေးအဖြပုံစံလေးတွေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ဂျင်းဘောင်းဘီကို လျှော်မယ်ဆို လက်နဲ့သေချာလျှော်တာက ကောင်းလား၊ သူများတွေ ပြောသလို အခြောက်လျှော်တယ်ဆိုတာမျိုးက ကောင်းသလား။
ဂျင်းကတော့ မလျှော်လေး ကောင်းလေပဲ။ လျှော်တာများရင် အရောင်ကျသွားတတ်သလို တစ်ခါတစ်လေ ၀တ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေတော့တာမျိးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ လျှော်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်နဲ့လျှော်လည်းရတယ်၊ စက်နဲ့ဆိုလည်း ရေညှစ်တာတို့ဘာတို့ မလုပ်ရင်ရတယ်။ တစ်ခုပဲအခြောက်ခံစက်ထဲ ထည့်တာမျိုးတွေ ဘာတွေတော့ မလုပ်သင့်ဘူး။
၂။ဆွဲသားပါတဲ့ဂျင်း၊ နောက် ဖယောင်းလိုဟာမျိုးပါတဲ့ နည်းနည်းပြောင်တဲ့ဂျင်းဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲ။
အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ မလျှော်နိုင်လေ ကောင်းလေပဲ။ အနံ့အသက်အတွက် စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် ဘောင်းဘီကို ထိပ်ပိတ်ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထည့် ထည့်ထားလိုက်ရုံပဲ။
၃။အရောင်ရင့်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ အရောင်ဖျော့တဲ့ ဂျင်း သူတို့ကိုလျှော်တဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုမလဲ။
အရောင်ရင့်တဲ့ ဘောင်းဘီတွေကို ရေအေးနဲ့ပဲ လျှော်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ အရောင်ကျမသွားမှာ။ အရောင်နည်းနည်းဖျော့တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ လျှော်တဲ့အခါ အရင့်လောက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။
၄။ဂျင်းဘောင်းဘီက ၀တ်ရတာ တောင့်တောင့်ကြီးနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တစ်ချိန်လုံးသား ၀တ်နေလိုက်။ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
၅။ချုပ်ဝတ်မယ်ဆို အပ်ချုပ်ဆိုင် မသွားခင် ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုအပ်သလဲ။
ခုသွားအပ်မယ့် ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့တွဲဝတ်မယ့် ဖိနပ်က ဘယ်လိုဖိနပ်မျိုး ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုစဉ်းစားသွားရလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ အတိုင်းကို သေချာလုပ်မှ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ရှည်မယ်။ ကွက်တိဆိုလည်း ကွက်တိပေါ့။ ကျန်တာကတော့ ချုပ်တဲ့သူ ကျွမ်းကျင်ရင် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။
ဒဏ်ကြေဆေး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုကြောင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး အသားပုပ်၍ ဆေးရုံရောက်
တိုင်းရင်းဒဏ်ကြေဆေး အလွန် အကျွံသုံးခြင်းကြောင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီး မိုးညိုမြို့နယ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီး နှစ်ဦး အသားများ ပုပ်သွားကာ မြို့ နယ်ဆေးရုံသို့ တင်ထား လိုက်ရကြောင်း ဆေးရုံမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၁၃ ရက်နေ့မှစကာ ယခုလ လဆန်းရက်အထိ ဒဏ်ကြေ လိမ်းဆေးကြောင့် ဆေးရုံသို့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယခုအချိန် အထိ ကုသ မှုပြုနေရဆဲဟု မိုးညှင်းမြို့ နယ် ဆေးရုံအုပ်ကြီးက Popular News သို့ ပြောသည်။
”လူနာကို တော်တော်ကြာကြာ ကု သမှု ပြုရမယ့် အခြေအနေ ရှိနေပါ တယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အမည်မသိ အကောင်ကိုက်ခြင်း ကို ဒဏ်ကြေဆေးလိမ်းရာမှ တစ်ဆင့် ယခုကဲ့သို့ အသားများ ပုပ်သွားခြင်းဟု ရောဂါဇစ်မြစ်ကို ပြောဆို၍ ရသော် လည်း အမှန်စင်စစ် တွင် ဒဏ်ကြေဆေး ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု မိုးညှင်းပြည်သူ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုသည်။
”ပူရင် ကောင်းတာပဲလို့ တစ်လွဲထင် တဲ့ပြည်သူအချို့ကို အသိပညာရစေချင် တယ်။ ဘယ်ဆေးမဆို တန်ဆေး၊ လွန် ဘေးပဲ။ ကျေးလက်တွေမှာ ဒဏ်ကြေ ဆေးကို အလွန်အကျွံ လိမ်းရုံမက လိမ်း ထားတဲ့ နေရာကိုပါ ပတ်တီးတွေ စည်း လိုက်တော့ပိုဆိုးသွားတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ဆေးရုံ တက်ရောက်နေသည့် အသက် ၄ဝ ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာ လက်မောင်းအလယ်မှစကာ လက်ဖမိုးအထိ အသားများ လောင်ကာ ပုပ်နေပြီးကျန်အ သက် ၃ဝကျော်အရွယ် နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာမူ ခြေ ဖမိုးအသား နှစ်လက်မကျော်ပုပ်နေ သည်ဟု ဆေးရုံအုပ်ကြီးထံမှ သိရသည်။
ဆေးရုံတက် လူနာတို့၏ ဆေးရုံ ထံပြောပြမှုအရ¤င်းတို့လိမ်းခဲ့သည့်ဆေး မှာ နာမည်ကြီးဒဏ်ကြေလမ်းဆေးများ ဖြစ်နေသည်။
နေပြည်တော် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ကုသ) က ”တိုင်းရင်း ဆေး ဥပဒေနဲ့အညီ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆေးတွေမှာ ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေ ရှိ တာ နည်းပါတယ်။ မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ ဆေးတွေကတော့အတိုင်းအဆမရှိ တော့ ပြဿနာဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင် တယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော်မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ထား သော်လည်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီး အချိန် ကြာမြင့်စွာ ပတ်တီးစီးမည်ဆိုပါလျှင် အသားလောင်သည့်ပြဿနာ ရှိလာနိုင် သည်ဟု ၄င်းက ပြော သည်။
”ဘာဆေးမှ မလိမ်းဘူး။ ဒီအတိုင်း ပတ်တီးတင်းနေအောင် စည်းထားရင် တောင် ကြာလာရင် ပြဿနာ ရှိလာနိုင် ပါတယ်” ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ခြေဖမိုးပေါ်ရှိ အသားအချို့ ပုပ် ကာ ဆေးရုံတက်နေသည့် အမျိုးသမီး မှာလည်း ဆူးစူးမိသဖြင့် ဒဏ်ကြေဆေး လိမ်းပြီး ပတ်တီးစည်းရာမှ တစ်ဆင့် ဖြစ်ခဲ့သည် ဟု ဆေးရုံမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
မိုးညှင်းမြို့နယ် ဆေးရုံအုပ်ကြီးက တိုင်းရင်းဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးများအနေ ဖြင့် သုံးစွဲနည်းကို ဆေးဘူးများပေါ်တွင် မြင်သာအောင်ရိုက်သင့်ကြောင်း ထောက် ပြပြော ဆိုသည်။
နောက်တခါပြန်လာမဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး မလုံးနဲ့ တွေ့ရင်ဆိုပြဖို့ ဂျက်စတင်ဘီဘာသီချင်း အလွတ်ကျက်နေသော လပြည့်ဝန်း
ထိုးထိုးထောင်ထောင် ခေါင်းတုံးဆံပင်ပေါက်၊ သနပ်ခါးပါးကွက်ကျား ထူပိန်းပိန်းနှင့် လပြည့်ဝန်းတစ်ယောက် သူ၏ သေးညှက်ညှက် ခန္ဓာကိုယ်ထက်က တစ်ပတ်နွမ်းဂါဝန်လေးကို သပ်ရပ်အောင် မကြာခဏဆွဲဆန့်နေသည်။ လက်ထဲက ပို့စကတ်အတွဲလိုက်ကို ပခုံးပေါ်လွှားတင်ဆွဲဖြန့်ထားရင်း ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအလယ်ရုံကြီးထဲက ခမ်းနားသော ဆိုင်ကြီးတွေရှေ့မှာ လွန်းကလေးလို ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေသည်။
သူမျှော်နေသည်က ဈေးထဲကို လာကြမည့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ ဖြစ်သည်။
သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ နိုင်ငံခြားသားတစ်သိုက် ဈေးထဲဝင်လာချိန် လပြည့်ဝန်းနှင့် ဘ၀တူ ပို့စကတ်ရောင်းသူ ကြီးကြီးငယ်ငယ်အချို့ ဧည့်သည်ဆီ ပြေးကပ်သွားသည်။ နှုတ်က ဘာရှာလဲ၊ ဘယ်သွားမလဲဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ခပ်သွက်သွက်နှုတ်ဆက်ပြီး ပို့စကတ်တွေကို ရောင်းဖို့ကြိုးစားသည်။
အပြင်မှာ မိုးတွေသဲသဲမဲမဲရွာနေသော်လည်း ဈေးအပြိုင်ရောင်းရသည့် အရှိန်ဖြင့် လပြည့်ဝန်းပါးပြင်က သနပ်ခါးများက ချွေးနှင့်ရော၍ ပျက်ပြယ်စပြုနေသည်။ အသက်(၁၃)နှစ်ဆိုပေမယ့် သေးကွေးလွန်းသည့် ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် လပြည့်ဝန်းကို ဧည့်သည်တွေက သနားချစ်ခင်ကြသည်။
ထိုကလေး လပြည့်ဝန်းမှာ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော The Hunger Games2ထဲမှ မင်းသမီးဂျီနာမဲလုန်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် တခမ်းတနားနေရာပေး ချစ်ခင်မှုကို ရထားသူလေးလည်း ဖြစ်သည်။
မင်းသမီးက လပြည့်ဝန်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပုံအကြောင်း အသေးစိတ်ရေးသားခဲ့သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မြန်မာပြည်ကိုလာလျှင် သူ ပထမဆုံးလုပ်မည့်အလုပ်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသို့သွား၍ လပြည့်ဝန်းကို နှုတ်ဆက်ထွေးပွေ့မည့်အကြောင်းကို သူမနှင့် လပြည့်ဝန်းတို့ တွဲရိုက်ထားသည့်ပုံနှင့်အတူ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် တင်ထားခဲ့တာဖြစ်သည်။
‘‘သူက ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလား (အလွန်အံ့သြသွားဟန်ဖြင့်) သမီး မသိပါဘူး။ သူနဲ့စတွေ့တော့ သမီးက ယပ်တောင်လေးသွားပြတာ။ သူ့မှာရှိပြီးသားတဲ့။ နောက်နေ့ထပ်လာတော့ သူက အင်္ကျီအမည်းဝမ်းဆက်လေးနဲ့။ သမီးက ဘာရှာလဲလို့ သွားမေးတာ။ ငါ သိန်းတစ်ရာဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ရှာနေတာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဆိုင်မှာ သူက လက်ဖက်ရည်၊ ပဲပလာတာ၊ အအေး၊ လက်ဖက်သုပ်၊ နန်းကြီးသုပ်တွေ စားသွားတယ်။ သမီးကိုလည်းကျွေးတယ်။ သူက သမီးကို အရမ်းခင်တာပဲတဲ့’’ဟု လပြည့်ဝန်းက မင်းသမီးဂျီနာမဲလုန်းနှင့် ဆုံတွေ့ပုံကို သတိတရပြောပြသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ အသည်းနှလုံး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသည် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတိုင်း လာတတ်သည့်နေရာဖြစ်ပြီး ဈေးနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ကို အမှီပြု၍ လပြည့်ဝန်းလို ကလေးတွေ ကျင်လည်ကျက်စားတတ်သည်။ ဧည့်သည်တွေကို စကားဝေေ၀ဆာဆာပြောပြီး မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းတွေ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေကို အမြတ်တင်ရောင်းချရင်း သူတို့ဘ၀ရပ်တည်နေသည်။ မင်းသမီးဂျီနာမဲလုန်းလို နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို တကပ်ကပ်လုပ်ခွင့်ရလိုက်ပြီဆိုလျှင် လပြည့်ဝန်းတို့အတွက် ပွပေါက်တိုးပြီ ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ မင်းသမီးကိုတော့ လပြည့်ဝန်းက ဘာမှအမြတ်တင် ရောင်းချခဲ့ပုံမရ။ မင်းသမီးပေးသည့် ပိုက်ဆံတွေကိုလည်း မယူဘူးဟု ငြင်းသည်။ ထို့ပြင် ကျပ်ငါးရာတန်သည့် ဖန်စီလက်စွပ်လေးကိုပင် သူ့ကို လပြည့်ဝန်းက လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့သည်ဟု ဂျီနာမဲလုန်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ရေးသားထားသည်။
‘‘ဒီပတ်ဝန်းကျင်က သမီးတို့ကို ဧည့်သည်ဆီက တောင်းစားတယ်လို့ပဲ ထင်တာကို မခံချင်ဘူး။ တကယ်တော့ သမီးတို့က ပစ္စည်းတွေကိုပဲ ဈေးတင်ရောင်းတာပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီနေ့က သမီးသူငယ်ချင်းကိုလည်း သူက မုန့်ဖိုးငါးထောင်ပေးတယ်။ သမီးကိုထပ်ပေးတော့ မယူချင်တော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ငြင်းတာ။ ဒါပေမဲ့ သူက တစ်သောင်းခွဲ အတင်းပေးသွားတယ်’’ဟု လပြည့်ဝန်းကပြောသည်။
ဧည့်သည်ဆီမှ ပိုက်ဆံကို အလကားမယူလိုသော်လည်း ဧည့်သည်ကျလောက်အောင်တော့ လပြည့်ဝန်းက ကရုဏာသက်ဖွယ် ပြောခဲ့ပုံရသည်။ မင်းသမီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် လပြည့်ဝန်းက အဖေဆုံးပြီး ကလေးငါးယောက်နှင့် ကိုယ်ဝန်သည်အမေကို သီလရှင်ထွက်ပြီး လုပ်ကျွေးနေရသည်ဟု ရေးထားသည်။ တကယ်တမ်း လပြည့်ဝန်းမှာ အဖေရောအမေပါ ရှိသေးသည်။ အဖေက စပါးတွဲကို အိမ်မှာလုပ်ပြီးရောင်းသည်။ တစ်မိသားစုလုံး၏ စားဝတ်နေရေးက ဖခင်၏ စပါးတွဲအလုပ်ကို မှီခိုခဲ့ရသည်။ အခုတော့ လပြည့်ဝန်း၏ ပို့စကတ်၊ ပန်းချီကား၊ ၀ါးယပ်တောင်လေးတွေရောင်းရင်း ဧည့်သည်ကို ဈေးထဲတစ်ဝိုက် လမ်းညွှန်ပေးသည့်အလုပ်က ၀င်ငွေဖြောင့်နေသည်။
နှစ်တန်းနှင့် ကျောင်းထွက်ပြီး အသက်ရှစ်နှစ်ကတည်းက လှည်းတန်း၊ အင်းလျားမြိုင်တစ်ခွင်မှာ လပြည့်ဝန်း စပါးတွဲရောင်းခဲ့ရသည်။ စရောင်းရောင်းချင်း မသွားတတ်၊ မလာတတ်မို့ အမေက အဖော်လိုက်ပေးသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် ပြောင်းရောင်းဖို့ခေါ်လာသည်။ အဖေ့အစီအမံဖြင့် စပါးတွဲရောင်းရင်းက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတစ်ခွင်တွင် လပြည့်ဝန်းနာမည်ပျောက်၍ ‘စပါးတွဲ’ဟု လူသိများလာသည်။
ဈေးနားတစ်ဝိုက် စပါးတွဲရောင်းရင်း တစ်ရက် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် လာစကားပြောသည်ကို ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့။ ဘေးမှ ပို့စကတ်ရောင်းသည့် သူငယ်ချင်းက သူ့ကို ၀င်ကူပြောပေးရင်း ပို့ စကတ်ရောင်းဖို့ အကြံပေးသည်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းကပဲ သူ့ကို ဘာသာစကားလေးမျိုးကို ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက်သင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘စလုပ်လုပ်ချင်းတော့ ဧည့်သည်ကို စကားတစ်ခွန်းပြောရဖို့ တအားခက်ခဲတယ်။ သူငယ်ချင်းကပဲ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်းဘာသာတွေကို သင်ပေးတာ။ သူပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကို သမီးက စိတ်ထဲမှာရော ဦးနှောက်ထဲမှာပါမှတ်ပြီး ညဘက်ကျရင် ပြန်ပြောတယ်။ နောက်တော့ အလိုလိုတတ်သွားတယ်။ အခု သမီးအကျွမ်းဆုံးက အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန်’’ဟု လပြည့်ဝန်းက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဟန်ဖြင့်ဆိုသည်။
မနက် ၇ နာရီ အိပ်ရာထ၊ စားသောက်ပြီးသည်နှင့် ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်း အေးရွာရှိ သူ့အိမ်ကနေ ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာကို သမ္မန်ဖြင့်ကူးသည်။ မနက် ၉ နာရီခွဲ ရထားစီးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသို့ ရောက်သည်နှင့် သူဖောက်သည်ယူသော ပန်းချီ၊ ပို့စကတ်ဆိုင်ကို ကူခင်းပေးသည်။ နေ့လယ်ပိုင်း ဧည့်သည်ကျချိန်တွင် ဈေးအလယ်ရုံကြီးနှင့် ပက်ဆန်ကုန်တိုက်ရှေ့ အနီးတစ်ဝိုက် ဈေးရောင်းရင်း၊ ဧည့်သည်ရှာရင်း၊ စားလိုက်၊ သောက်လိုက်၊ ကစားလိုက်နှင့် လပြည့်ဝန်းတို့ အလုပ်လုပ်သည်။
တစ်နေ့တည်း ပို့စကတ်ပန်းချီကားတွေကို ငွေသောင်းနှင့်ချီ ရောင်းရသလို လုံးဝမရောင်းရဘဲ အိမ်ပြန်ရသည့်နေ့လည်း ရှိသည်။ သူ့ဝင်ငွေက ကလေးငါးယောက်၊ ဗိုက်ထဲမှာတစ်ယောက်နှင့် အဖေတို့၊ အမေတို့အတွက် အနည်းငယ်တော့ အသက်ရှူချောင်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲ ရွယ်တူသူငယ်ချင်းများ ကျောင်းတက်တာ မြင်တိုင်းအားကျသော်လည်း မိသားစုက တော်တော်ဆင်းရဲ၍ အလုပ်ပဲလုပ်ချင်သည်ဟု လပြည့်ဝန်းခေါ် စပါးတွဲက ပြောသည်။
သွက်သော လပြည့်ဝန်းကို မင်းသမီးဂျီနာမဲလုန်းတင်မဟုတ်။ ဧည့်သည်တော်တော်များများက ချစ်ကြသည်။ မျက်စိမကောင်းဘူးဟုပြော၍ သြစတြေးလျမှ ဧည့်သည်အန်တီကြီးက ရွှေဘုံသာလမ်းထဲခေါ်ပြီး ချက်ချင်းမျက်မှန်လုပ်ပေးသည်။ အင်္ကျီအ၀တ်အစားနှင့် အသုံးအဆောင်လေးတွေ ၀ယ်ပေးသွားသူလည်းမရှား။ သူ့ဆီက ဘာမှမ၀ယ်ဘဲ အပြောကောင်းလို့ မုန့်ဖိုးအဖြစ် ဒေါ်လာလေးငါးဆယ် ပေးသွားသူများလည်း ရှိသည်။
ငယ်ငယ်လေးနှင့် ငွေရှာနိုင်သော လပြည့်ဝန်းတို့လေးတွေမှာ ပိုက်ဆံကိုတော့ သုံးလည်းသုံးသလို ဖြုန်းလည်းဖြုန်းတတ်နေသည်ကတော့ ရင်လေးစရာ။ လက်ထဲပိုက်ဆံရသည်နှင့် မုန့်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ၀ယ်စား၊ တန်မတန်မချင့်ချိန်ဘဲ အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်တွေဝယ်နှင့် လပြည့်ဝန်းတစ်ယောက် နည်းနည်းတော့ အလှမက်ချင်ပုံရသည်။
တကယ်တော့ သူတို့လို ပို့စကတ်ရောင်းသူများကို ဈေးတာဝန်ရှိသူတွေက တရားဝင်ခွင့်ပြုမထား။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များကို လုယက်ရောင်းချရာကနေ ဆူညံပူညံဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်တွေ စိတ်ငြိုငြင်မှာကို ဈေးတာဝန်ရှိသူတွေက စိုးရိမ်သည်။ လပြည့်ဝန်းတို့အတွက်ကျတော့လည်း ဒီဈေးကိုတည်မှီပြီး ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
တချို့ ဧည့်သည်တွေကျတော့လည်း သူတို့နား ပေကပ်ကပ်ရပ်ပြီး အတင်းရောင်းတတ်သော လပြည့်ဝန်းတို့ကို စိတ်မရှည်။ အော်လွှတ်သည်။ ဒါပေမဲ့ လပြည့်ဝန်းတို့က မဖြုံ။ ခပ်တည်တည်ပင်။
‘‘ဧည့်သည်နားရောက်ရင် ဟဲလိုဘာညာနဲ့ ဖောရှောလုပ်ပြီး ရောင်းရလည်း မရောင်းရသေးဘူးပဲပြောပြီး ရောင်းတယ်။ သူတို့အော်လည်း စိတ်မညစ်ပါဘူး’’ဟု လပြည့်ဝန်းက သွက်သွက်လက်လက်ပြောသည်။
အခုတော့ လပြည့်ဝန်းက ဈေးရောင်းရင်းတစ်ဖက်နှင့် အားလပ်ချိန်မှာ ဂျပ်စတင်ဘီဘာရဲ့ ကမ္ဘာကျော် Baby သီချင်းကို အလွတ်ကျက်ဖို့ အလုပ်တစ်ခုပိုလာသည်။ အကြောင်းက ဂျီနာမဲလုန်းနှင့်တွေ့စဉ်က သူအကြိုက်ဆုံး အဆိုတော်က ဂျပ်စတင်ဘီဘာဟု ပြောထား၍ ဖြစ်သည်။
‘‘သူက သီချင်းဆိုတဲ့အဆိုတော်တွေထဲမှာ ဘာကြိုက်လဲလို့ပြောတော့ သမီးက ဂျပ်စတင်ဘီဘာ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ သူက တအားရယ်ပြီးတော့ ငါလည်း ကြိုက်တယ်ဆိုပြီး မုန့်ဆိုင်မှာ သမီးကို အဲဒီဘေဘီသီချင်း ဆိုပြတယ်။ ကလည်း ကပြတယ်။ (ရယ်လျက်) နောက်တစ်ခေါက် သူပြန်လာရင် အဲဒီခွေ လက်ဆောင်ယူခဲ့မယ်။ နင်က အဲဒီကျရင့် ငါ့ကို သီချင်းဆိုပြတဲ့’’ဟု လပြည့်ဝန်းကပြောသည်။
တစ်သက်လုံး ဒီအလုပ်ကို သူလုပ်ဖို့ ရွေးထားပုံရသည်။ သူတို့မိသားစုထဲက တစ်ဦးတည်းသော ကျောင်းသားဖြစ်သည့် ဒုတိယတန်းရောက် မောင်လေးကို ဆယ်တန်းအောင်ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာပြီး ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်စေချင်သည်ဟု ဆိုသည်။
မေးသမျှ ဖြေနေရင်းကနေ ဧည့်သည်တစ်သိုက် ဈေးထဲဝင်လာတော့ သူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်မကို ခပ်လောလောတစ်ချက်ကြည့်ရင်း ဈေးရောင်းဖို့ အချိန်မရှိတော့လို့ သူသွားတော့မည်ဟု နှုတ်ဆက်သည်။ ရိုးသားမှုရှိသော်လည်း ကလေးငယ်ဘ၀ဖြူစင်ခြင်းတို့ထက် စောစီးစွာ အရွယ်ရောက် ရင့်ကျက်သွားသော လပြည့်ဝန်းတစ်ယောက် ပက်ဆန်ကုန်တိုက်ရှေ့ကနေ ဈေးထဲဝင်သွားချိန်တွင်တော့ ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်း မိုးရေစက်များက သည်းထန်စွာ ရွာချလိုက်ပါတော့သည်။ ။
အီဘိုလာ ရောဂါပိုးကို သတ်နိုင်မည့် ဆေးတွေ့ ပြီ(Breaking news)
အမေရိကန် နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေသည့် အီလိုလာပိုး ကူးဆက်ခံနေရသူဒေါက်တာ ဘရက်ဒလီ ကို
ZMapp ဟုခေါ်သည့် ဆေးရွက်ကြီး ပင်တမျိုးက ဖေါ်စပ်ထားတဲ့ဆေးနဲ့ ကုသလိုက်တဲ့အခါ. အီဘိုလာ ကူးစက်ခံလာရတဲ့ ဒေါက်တာ ဘရက်ဒလီ တယောက်ချက်ချင်းသက်သာလာတယ် ဆိုပါတယ်။ အမေရိက က အတ်လန်တာ ဆေးရုံ မှာ ကုသ နေပါတယ် ။ရောဂါရှိတဲ့မျောက်တွေကို စမ်းသတ်ကုသတဲ့အခါ သုံးပုံ. နှစ်ပုံ. အသက်. ရှင်တယ် ဆိုပါတယ်။
ယခုဆေးရွတ်ကြီးပင်မျိုးမှာ သြစတေးလျAustralia နိုင်ငံမှာပေါက်ရောက်ပြီး ဆေးပြင်းလိတ်ထုတ်လုပ်တဲ့ အပင်မျိုးမှာပါဝင်ပြီး မျောက်တွေကို အရင်စမ်းသတ်ခဲ့တာ တိုးတက်မှုတွေတွေ့ ရပြီး ပိုးတွေအား လျှော့ကုန်ကြောင်း။ဌင်းဆေးအာနိသင်မှာ အဆိပ်တောက်များကို နိုင်သည်-ပိုးများကိုသေစေနိုင်ပါသည် ။ ဌင်းဆေး အား လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ခန့် ကပင် စမ်းသတ်မှုများပြုလုပ်နေခဲ့သည်။
ယခုအီဘိုလာ လူနာ ဒေါက်တာ ဘရက်လီ ပြန်လည်နေကောင်းအောင် ကုသပြီးပါက အာဖရိက နိုင်ငံများမှ အသေစောင့်ရေကြသည့် လူနာများအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းကျိုးမပေး မူးရစ်ဆေးဆိုသော်လည်း လူသားတွေအသက်ကယ်တင်နိုင်သည့် ဆေးရွတ်ကြီး မျိုးပင်မှာ အီဘိုလာနိုင်သည့် ကယ်တင်ရှင်အပင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
(1) Rightly or wrongly,..
(2) More's the pity!
(3) Notapretty sight!
(4) Listen everyone!
(5) Have the heart?
(6) So sudden!
(7) It's not intentional!
(8) Cross my heart!
(9) How astonishing!
ဘယ်လောက် အံ့သြဖို့ ကောင်းလဲ။
(10) That's not chicket!
(11) Don't talk rot!
(12) I'm like you!
(13) Nice chat!!!
(14) That's it!
(15) All is forgiven!
(1) How's by you?
(3) What happened next?
(4) Not any feeling!
(5) Not only that!
(6) Stairs is stairs!
(7) Go chase yourself!
(8) Going to complain!
(9) Make no mistake!
(10) Mind your head!
(11) Hold your horses!
(12) It all depends!
(13) All in all,...
(14) Couldn't be happier!
ဒီ့ထက် ပျော်စရာကောင်းတာ မရှိတော့ဘူး။
(15) Tell me another!
(1) Surprised to see you!
မင်းကို တွေ့လိုက်ရတော့ အံ့အားသင့်သွားတာပဲ။
(2) There you go again!
(3) What's it to you?
(4) Stay away from him!
(5) You're my age.
(6) Long time no see!
(7) Back inamoment!
(8) Are you day dreaming?
(9) I cross my heart!
(10) I think you can!
(11) It fits just right!
(12) Sorry to bother you!
(13) You're most understanding!
(14) Nice talking to you!
ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောလို့ သိပ်ကောင်းပါရဲ့..။
(15) I'd better get going!
(ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကား Daily English Expressions ကို အားပေးဝယ်ယူကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာချစ်သူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောအတိုများ Short Conversations In Use စာအုပ်လည်း မကြာခင် ထွက်လာတော့မှာမို့ ဆက်ပြီး အားပေးကြပါဦး..လို့။)
သူဌေးဖြစ်တဲ့ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ တူညီတဲ့ စည်းကမ်း ၅ ချက်
သူဌေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဘုရားမှာ ဆုတောင်းနေရံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို မမေ့မလျှော့ပဲ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လိုက်နာရမဲ့ အဓိက အချက်လေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါဘဲ။
၁. ကျန်းမာရေးသာလျှင် အဓိက
နေ့စဉ်နေထိုင်မှု ဘဝမှာ ကျန်းမာရေးက အဓိက ကဏ္ဏမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၂. အမြဲတမ်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွ နေထိုင်နိုင်ခြင်း
နေ့တိုင်းပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုပြီးထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေလို့လဲဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေတာထက်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတက်မှသာလျှင်လူချစ်လူခင်ပေါလာပြီး ကံကောင်းခြင်းနဲ့ အလုပ်လည်းအဆင်ပြေလာမှာပါ။
၃. ဈေးအဝယ်တော်တာကလည်း သူဌေးဖြစ်မယ့် အမျိူးသမီးတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အချက်
၄. အမျိူးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် လှလှပပနေထိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလဲ မမေ့နဲ့
ကိုယ်က မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ထားပါနဲ့။ လှလှပပ နေထိုင်တက်တယ်ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။
၅. အိမ်ရဲ့ ဝင်ငွေထွက်ငွေ စာရင်းကိုလည်း သေသေချာချာ ပြုစုရန်
အိမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံကို သုံးပြီး ပိုရင်စုဖို့ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။
အတုယူအားကျစရာကောင်းသော အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ၏ ဘ...
ဒဏ်ကြေဆေး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုကြောင့် အမျိုးသမီးနှ...
နောက်တခါပြန်လာမဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး မလုံးနဲ့ တွေ့ရ...
အီဘိုလာ ရောဂါပိုးကို သတ်နိုင်မည့် ဆေးတွေ့ ပြီ(Brea...